Ahoana no fomba fiarahako mametaka sary amin'ny Windows? - Microsoft
Tena > Microsoft > Zaitra sary Microsoft - boky torolalana feno
Zaitra sary Microsoft - boky torolalana feno
Ahoana no fomba fiarahako mametaka sary amin'ny Windows?
Sokafy nySaryGalerie ary tadiavo ny fampirimana misysaryianao dia temanambatra ny. Tazomy ny lakilen'ny CTRL hisafidianana marobesaryary avy eo tsindrio nySaryGalerie Mamorona Galerie. Safidio nySaryFiasa endri-javatra ary miroso amin'ny fanondroana ny faritry nysaryte hisolo ianao.
Ahoana no fomba hanjahako sary ao amin'ny Windows 10?
Tsindrio ny Menu eo amin'ny farany ambony ankavia ary safidio ny Insert. Amin'ity indray mitoraka ity dia safidio ny sary faharoa izay tianao atambatra. Tetezo hatrany amin'ny ankavanana ny sary faharoa. Hamarino tsara fa tsy misy ampahany amin'ny sary nataonao voalohany ny sary.15 martsa 2021
fomba fijery / fomba fijery madio
Ahoana no fomba amboaranao sary miaraka amin'ny Microsoft Word?
Makà andianasaryavy amin'ny toerana iray tokanana toerana ka ny tsirairaysaryoverlaps ilay teo alohan'io ary ampidiro aoSaryGallery. Safidio nysaryhampiasainao, ary eo amin'ny kiheba Forony, ao amin'ny vondrona Tools, kitiho ny Panorama.SaryHampifanaraka ny galeriesarySYmanambatra nyizy ireo ho lasa singa vaovao.
Inona no rindrambaiko manjaitra sary tsara indrindra?
PTGui. PTGui mamelahanjairanapanoramas misy tsanganana sy tsanganana maro.
Panoweaver 10. Panoweaver dia mamela anao hitahiry ny panoramaso ho karazana karazan-drakitra samihafa.
SARYEditor Composite (ICE) ...
Salama ary tongasoa eto amin'ny Lenscraft androany aho mijery panoramas stitching miaraka amin'ny Affinity Photo. Izaho koa dia hanao lahatsoratra misaraka mampiseho ireo sary mitovy amin'ny Adobe Photoshop hahafahanao mampitaha ny fomba roa ampiasako hamoronana panoramas, misy dingana telo.
Ny dingana 1 dia misy ny firaketana ireo zana-kazo ho an'ny panorama, izay amin'ity tranga ity dia efa nataoko tamin'ny dingana 2. Manodin-drakitra ireo rakitra manta aho mba hanomanana azy ireo amin'ny zaitra ary amin'ny dingana 3 dia ataoko miaraka miaraka ireo zana-kazo amin'ity lahatsoratra ity hijerena ny dingana 2 sy 3. Efa nalaiko ireo sary roa tiako hidirana ary nanafarana azy ireo haka iray.
Mampiasa ny Capture 1 aho satria naka ny sary niaraka tamin'ny Fujixt3 aho ary hitako fa ny Capture 1 no manome ny valiny tsara indrindra. Manomboka manitsy ny iray amin'ireo sary roa aho. Voalohany, atsahako ny fanitsiana ny fanodinkodinam-pahefana satria tsy tiako hivelatra ilay sary.
Noraisiko tamin'ny solomaso Fuji 16-80 izay somary misy fanodikodinana kely eo amin'ny zoro malalaka izany, fanadihadihana ao amin'ny tranokalako ary ampidiriko ao amin'ilay famaritana ny lahatsoratra eto ambany ary hampiasa ny safidy fanitsiana diffraction ho an'ny antony anaovako ilay topimaso topimaso nanazava. Manaraka izany, hitako ireo loko sary vao manomboka amin'ny fisafidianana tsipika mombamomba ny loko vaovao ho an'ity sary ity dia tiako hampiasa ny fiolahana mifanohitra avo lenta amin'ny sarimihetsika satria tiako ny vokany amin'ny aloka rehefa manokatra azy ireo aho. Ampitomboiko ho 5 500 eo ho eo koa ny mari-pana amin'ny fandinihako ny feon-tsary ankehitriny.
hitman miverina mifanentana
Hampiasa ny slider range aho mba hamerenana amin'ny laoniny ny fisongadinana sy ny aloka, nasiako ihany koa ny sasany amin'ireo fanitsiana hafa mba hahatonga ny sary ho araka ny itiavako azy. Farany dia hanamboatra ny fihenan-tsasatra sy ny fihenan'ny tabataba aho izao azoko atao ny mandika ny fanitsiana ataoko amin'ny takelaka fanitsiana dia misafidy ny sary faharoa aho ary mampihatra ireo fanitsiana amin'ilay sary izay fantatro fa hifantina ireo sary roa ianao hahita azy ireo raha misy iray Raha misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny loko na ny famirapiratany dia hanao fanitsiana bebe kokoa aho mba hifanaraka amin'ireo sary roa dia azoko atao ny Manondrana ireo sary roa izay vonona hanatevin-daharana amin'ity ohatra ity dia manondrana ireo sary ho toy ny fisie TIFF 16-bit ho ny biraoko amin'ny alàlan'ny habaka loko Adobe RGB Ankehitriny ho an'ny dingana fahatelo amin'ny fizahan-tsika ny sary, sary Inaffinity natomboko tamin'ny famoronana Panorama Vaovao avy amin'ny menio fisie azoko ampiana ireo sary roa ananako avy amin'ny birao I avy eo tsindrio ny bokotra Merge Panorama. Ny sary am-pitoviana dia mitondra anao voalohany amin'ny sary kely rehefa faly aho fa manana ny rakitra rehetra ho an'ny panorama aho, azoko atao ny manindry ny fikajiana bokotra ok ary avy eo mamadika ny panorama ary manokatra ny valiny amin'ny tonian-dahatsoratry ny panorama dia afaka mahita ny fiolahana curve izay misy ny sary nopetahana hanitsiana ny mifanindry tsara sy hahatonga ny endriny feno mifanindry 24mm feno rehefa maka panorama misy masony zoro toa izany dia tsara kokoa ny mampiasa lohan'ny panorama izay tsy nataoko r ity naoty ity dia toy ny habaka fotsy, fa raha Misafidy ny safidy aho rehefa mandoko, ny sarin'ny firaisana dia mameno ny banga amin'ireo faritra hitako fa tsy mandeha tsara izany dia ny sisiny manify lava ananantsika any amin'ny faran'ny sary ka izaho no ho sisin'ny Vakio ny zana-kazo hanesorana azy amin'ilay fitaovana fanapahana.
Avy amin'ireo no ahafahako manao fanitsiana fanovana fanampiny hamita ilay sary Raha mbola tsy hitanao izany dia nanao kinova faharoa tamin'ity fampianarana ity aho tamin'ny alàlan'ny Photoshop. Ny ampahany voalohany amin'ny lesona dia mitovy, fa ny fampifanarahana azy io dia mitaky dingana fanampiny, na dia sarinao firaisana aza no ampiasainao dia heveriko fa mbola mahaliana ihany ny mahita ny tsy fitoviana dia manantena aho fa nankafizinao ity lesona ity
Ahoana ny fomba fanaovana stitch sary miaraka amin'ny Microsoft Image?
Aorian'ny fametrahana azy dia atombohy ny rindrambaiko. Ity sary ity dia mampiseho anao izay ho hitanao amin'izay. Tsindrio ny File & gt; & gt; Vaovao ary mivezivezy mankamin'ny misy ny sarinao. Raha tsy mifanakaiky izy ireo dia ampiasao ny CTRL hifantina azy ireo. Tsindrio ny Open. Andraso kely, arakaraka ny habetsaky ny sary ampiasainao. Raha vantany vao vita io dia ho hitanao miakatra eo amin'ny efijery.
Iza no rindrambaiko fanjairana sary tsara indrindra ho an'ny Windows?
Ireto ambany ireto ny fampiharana fanjairana sary tsara indrindra ho an'ny Windows izay azonao ampiasaina hanamboarana ny sarinao marobe ary hamadika azy ho sangan'asa iray. 1. PTGui (fividianana indray mandeha $ 141) PTGui dia iray amin'ireo rindrambaiko manjaitra sary Windows malaza misy amin'ny tsena ankehitriny.
Inona no fomba tsara indrindra hiarahana manjaitra sary?
Raha mampiasa PC Windows ianao dia manana safidy mora ampiasaina hametrahana sary mifanila amin'ny solo-sainanao. Raha tianao ny baiko dia azonao atao ny mampiasa ImageMagick. Raha olona manana sary ianao, Paint 3D no safidinao tsara indrindra hanaovana ilay asa.
Maharitra hafiriana ny fametahana sary panoramika?
Ny programa dia miantehitra amin'ny stitching manafaingana GPU izay ahafahanao manjaitra panorama 1 Gigapixel ao anatin'ny 25 segondra monja. Ny iray amin'ireo fahaiza-manao mahaliana indrindra dia ny famoronana sary panoramika boribory (360 ° x 180 °) feno.